Kwuru na Keto Instant Pot cookbook gị ga - akwụghachi ụgwọ ya
Mbido » Freebies » Kwuru na akwụkwọ nri keto gị ngwa ngwa
N’oge dị mkpirikpi naanị, ndị otu Keto Resource na-enye akwụkwọ nri ọhụrụ ha maka n'efu! Ihe ị ga - akwụ bụ obere ego maka mbupu na njikwa.
Akwukwo nri nke Keto Instant Pot Cook nwere akwukwo iri-abuo di mfe iji dozie nri keto na-egbu egbu nke i na akwado n’ime Instant Pot (aka a cooker pressure)
Iji Keto Instant Pot Cookbook, ị ga-enweta
Ntụziaka maka otu esi esi ite ya
10 Keto nri ụtụtụ Keto, gụnyere Spinach na Feta Frittata, Nri na Zucchini achịcha, na Ham na Cheese Broccoli Brunch Bowl
10 Ezi ntụziaka nke anụ tinyere, egusi, anụ ehi, steak & salsa, na ndị ọzọ
10 Azụ azụ na esi nri nke mmiri nke gụnyere ọkacha mmasị dịka salim grey salmon na galiki na -akpo paprika oporo!
9 Nri nri nri nri dị mma dị ka obere nri
11 Nri dị ụtọ keto ofe tinyere akwukwo nri ọkụkọ, anụ ezi anụ ezi lek, na ndị ọzọ!
Biko Rịba ama: Onyinye a dị irè mgbe ị na-eweta ya. Pịa n'okpuru ka jidere nke gị ugbu a ka ị na-eweta nke ikpeazụ. Ọ ga - eju gị anya etu esi esi nri ngwa ngwa ga - enyere gị aka ịmị abụba, mee ka ahụike gị dịkwuo mma ma bulie ogo gị!
>> Pịa Ebe a iji nweta akwụkwọ nri a n'efu <<
A na-enye akwụkwọ nri a nke ndị otu Keto Resource n'efu dịka ụzọ iji nyere aka mee ka ị bata n’obodo ndị Keto.
Onweghi otu ite ozigbo? Ndị a bụ ụfọdụ ndị na-esi nri ọkụ ọkụ & ngwa ngwa dị na Amazon
Nkwupụta Affilaite: offọdụ njikọ na weebụsaịtị anyị bụ njikọ njikọta. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị pịa njikọ ahụ ma zụta ihe ahụ, anyị nwere ike ịnweta ọrụ mgbakwunye yana enweghị ụgwọ ọzọ maka gị. Echiche niile bụ nke anyị ma anyị na-akwado ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ anyị kwenyere na ọ ga-aba ndị na-agụ akwụkwọ anyị uru.
January 9, 2020 Admin Freebies, Keto Enweghị asịsa